कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख ४ गते बुधबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख ४ गते बुधबारको राशिफल !
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०३, २०७६१७:४३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख ४ गते। बुधबार। इश्वी सन् २०१९ अप्रिल १७ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चौलाथ्व। चैत्र शुक्लपक्ष। तिथि– त्रयोदशी, २१:०० बजेउप्रान्त चतुर्दशी। नक्षत्र– उत्तरफाल्गुनी, २२:३० बजेउप्रान्त हस्त। योग– ध्रुव, १७:२९ बजेउप्रान्त व्याघात। करण– कौलव, १०:०८ बजेदेखि तैतिल, २१:०० बजेउप्रान्त गर। आनन्दादिमा प्रवर्द्धमान योग। चन्द्रराशि– कन्या। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:४० बजे, सूर्यास्त– १८:२९ बजे र दिनमान ३२ घडी ०२ पला। प्रदोष व्रत। महावीर जयन्ती। भक्तपुरमा छुमा गणेश यात्रा। सर्वार्थसिद्धि योग २०:३० बजे प्रारम्भ।
शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनुको साथै मानसिक रुपबाट प्रशन्नता रहनेछ । काल्पनिक दुनियाँको परिभ्रमणद्वारा आफ्नो सिर्जनाशक्तिमा नयाँपन ल्याउन सक्नु हुनेछ । साहित्यकलाको क्षेत्रमा पनि आफ्नो सृजनात्मकता प्रस्तुत गर्न सक्नु हुनेछ । विद्यार्थीहरुले विद्याभ्यासमा राम्रो प्रदर्शन गर्नेछन् । दैनिक कार्यमा केहि अवरोध आउनेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा शिर्ष अधिकारीहरुको साथ वादविवाद नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला । अधिक परिश्रम पश्चात कम फल प्राप्त हुनेछ ।
आज वाणी र व्यवहारमा संयम राख्नु आवश्यक छ । जलशायबाट टाढा रहनु होला । शारिरीक र मानसिक रुपले स्वास्थ रहनु हुनेछ । जमिन र सम्पतिको पत्रमा सहि मोहर लगाउँदा ध्यान राख्नु होला । मनमा उठेको कल्पनाको लहरले एक अनौठो विश्व निर्माणको अनुभव गराउनेछ ।
आजको दिन सुख शान्तिपूर्वक बित्नेछ । दाजु-भाईसंगको मेलजोलले लाभ हुनेछ । मित्र र स्वजनको साथ भेट हुनेछ । मध्याहन पश्चात मनमा नकारात्मक विचारले निराशता ल्याउनेछ । समयानुसार भोजन प्राप्त हुँदैन । आज केहि अधिक भावुकताको अनुभव हुनेछ । घरको वातावरण उग्र रहनेछ । जमिन आदिको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अघि सोच विचार गर्नु होला । अधिक भावुक नबन्नु होला ।
आजको दिन निकै लाभ लिएर आउनेछ । परिवारजनको साहारा मिल्नेछ । वाणीको सुन्दर शैलीले आज तपाइँको कार्य सरलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ । मध्याहन पश्चात प्रवास या पर्यटनको आयोजना गर्न सक्नु हुनेछ । सहकार्य गर्नेहरुको साथ निकटताको अन्नुभाव हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । मनको प्रशन्नताले आनन्दलाई बढाउनेछ ।
तपाइँको कार्यपद्धति दृढ मनोबलयुक्त रहनेछ । ठुलाबडाहरुबाट लाभ हुनेछ । वैवाहिक जीवनमा मेलजोल बनि रहनेछ ।वाणीमा अधिक उग्रता रहनेछ । पारिवारिक वातावरणमा मेलजोल बनि नै रहनेछ । आज अधिक खर्च नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला । टाढा रहेका विदेशी स्वजन, मित्रको साथ निकै दिन पश्चातको व्यवहारले आजको दिन आनन्दप्रद र लाभदायी रहनेछ ।
मनको भावनाको प्रभावमा अधिक नआउनु होला । भ्रान्तिको निराकरण गर्नु अनिवार्य छ । कसैको साथ उग्र चर्चा र झगडामा नपर्नु होला । पारिवारिक सदस्यको साथ मतभेद नहोस् त्यसको ध्यान राख्नु होला । आय भन्दा अधिक खर्च हुनेछ । मध्याहन पश्चाता पिताको सहकार्य मिल्नेछ । यसले तपाइँको मनबाट चिन्ताको भार कम गरि मन प्रफुल्लित रहनेछ । स्वास्थ्यको विषयमा अशंतोष हुनेछ ।
नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु होला । तपाइँको मन वैचारिक स्तरमा रहनेछ । साथै मनोबलको दृढतामा कमि आउनेछ । मित्रवर्गबाट विशेष लाभ हुनेछ । व्यापारमा पनि लाभ हुनेछ । मध्याहन पश्चात भावुकताको अधिकताले मनमा निराशता रहनेछ । चिन्ताले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्नेछ । वाणी र व्यवहारमा संयम राख्नु होला । खर्चको मात्रा अधिक रहनेछ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाइँको कार्यको निकै प्रशंशा हुनेछ । कार्य निकै सरलताको साथ पूर्ण हुनेछ । स्थावर सम्पतिको दस्ताबेजको निम्ति निकै अनुकुल दिन हुनेछ । सरकारी कार्यवाहीसंग सम्बन्धित कार्यमा लाभ हुनेछ । गृहस्थ जीवनमा मधुरता रहनेछ । मध्याहन पश्चात मित्रबाट लाभ हुनेछ । दिनभर वैचारिक स्तरमा अनिश्चितताको वातावरण रहँदा कुनै निश्चित निर्णयमा आउन सक्नु हुने छैन । आवश्यक निर्णय मध्याहन पश्चात नलिनु होला ।
आजको दिन तपाइँको व्यवहारमा उग्रता रहनेछ र साथै स्वास्थ्यमा केहि कमजोरी पनि रहनेछ । धार्मिक यात्रा या प्रवासको सक्म्भावाना छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा विघ्न या विवादको सम्भावना रहेको छ । मध्याहन पश्चात कार्यालयको वातावरणमा केहि सुधार आउनेछ । कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । कार्य क्षेत्रमा तपाइँको प्रभुत्व बढ्नेछ । स्थावर सम्पतिको दस्तावेजको निम्ति अनुकुल समय छ । पिताको तर्फबाट लाभ हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ ।
बिरामीको लागी अधिक खर्च हुनेछ । आकस्मिक धन खर्च हुन सक्नेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ उग्र नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला । बाहिरको खान-पिनको व्यवस्थालाई सम्भवत आज स्थगित गर्नु होला । चारित्रमा कसैले प्रश्न उठाओस् यस्तो कुनै कार्य नगर्नु होला । निरर्थक वाद-विवाद या चर्चाबाट टाढा रहनु होला ।
व्यापारी वर्ग तथा भागिदारको साथ सम्हालिएर कार्य गर्नु होला । वैवाहिक जीवनमा मन दुखको प्रसङ्ग बन्नेछ । विद्यार्थिको विद्याभ्यासमा राम्रो प्रदर्शन रहनेछ । घरको वातावरण शान्तीदायी रहनेछ । दकिनिक कार्यमा केहि विघ्न आउन सक्दछ ।
आजको दीन मध्यम फलदायी रहनेछ । परिवारको सदस्यको साथ मेलजोल बन्नेछ । दैनिक कार्यमा विलम्ब हुनेछ । सहकार्य गर्नेको कम सहयोग मिल्नेछ । जिवनसाथीको साथ मनमुटावको प्रसङ्ग बन्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा यश प्राप्ति हुनेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक ०५ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज २९ गतेको राशिफल